Nezvedu | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Dzidza Chirungu kana chiFrench muCanada
Kubudikidza nemakirasi akasimba, anodyidzana uye anopinda mudzidzi.
KUSARUDZWA KWEPROGRAMU KWAZVO ZVESE ZVINOGADZIRA UYE ZVINODABLI ine sarudzo kwauri
Pane nzira iri nani yekudzidza mutauro pane kuirarama? BLI haifungi kudaro. Ndicho chikonzero nei edu ese echirungu neyechiFrench makosi akagadzirwa kuti aakwanise zvinodiwa uye zvido zvevadzidzi vedu, uye zvakavakirwa pakushandura uye nzira yekudyidzana iyo isingazongobatsira vadzidzi kuti vanyatsogona uye kugona mumutauro, asi zvakare ichavapa zvishandiso zvekubudirira padanho repasi rose BLI inoita kuti ruzivo rwemitauro ruenderane neupenyu hwako mune zvakasiyana siyana zvinobatsira kupfuura zvaunofungidzira. Kuwedzera zvaunogona kusarudza uye kuwedzera kubudirira kwako ndizvo zvatiri kutarisira.
BLI inotora nzira yekudzidza mutauro kunze kwekirasi, nekupa vadzidzi zviitiko zvakasiyana siyana zvekunakidzwa uye zvinonakidza uye chirongwa chePamestay chirongwa icho chinobvumira vadzidzi kutora ruzivo rwavo rwekudzidza kune imwe nhanho, kudzidza mune chairo nyika. Chimwe chinhu cheBLI yekudzidza chiitiko kugadzirisa uye kugadzirisa zvirongwa izvo zvichabatsira vadzidzi kudzidza kutenderera kwavo, munzvimbo ine hushamwari, nemukana wekuita nevamwe vadzidzi veBLI vanobva pasi rese.
Kweanodarika makore makumi matatu nematanhatu isu takabatsira zviuru zvevadzidzi vanobva pasirese nyika kuzadzisa zviroto zvavo uye kuti vagare pasi rose. Wese wedu, BLI vadzidzisi, manejimendi, uye makurukota, tiri kutarisira kukugamuchirai kune imwe yezvikoro zvedu uye kuva padivi nemi mune ichi chikuru chiitiko cheupenyu: "kudzidza mutauro kunze kwenyika".
Zvimwe zvikonzero zvekudzidza kuBLISei uchiita BLI?
40 makore ane ruzivo
Kukudzwa mune dzidzo
Munhu mumwe nomumwe anotarisa
Wide zvakasiyana-siyana zvezvirongwa
Flexible kutanga mazuva
Yakavimbiswa Kubudirira Makirasi Madiki
Purogiramu yemabasa anofadza
Nzvimbo mbiri muCanada
Montreal uye Quebec Guta
Yakatenderedzwa neresitorendi, kofi uye yekuvaka yezvakaitika kare
Zvivakwa zvemhando yepamusoro
Emazuvano uye akagadzikana Makirasi madiki
Zvirongwa zvemitauro miviri
Zuva nezuva mushure memabasa echikoro uye kushanya kwevhiki
Airport Kutora-uye Kudonhedza kure
Rubatsiro neVisa uye CAQ
Emergency medical inshuwarheni
Nzvimbo dzakasiyana dzekugara
Online mutauro kuongororwa